शंकर लामिछानेको सम्झना | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 01/24/2009 - 18:08
बरु आफू ठट्टामा लेखक बनेको जिकिर गरिरहे । उनलाई आफू छिटो जन्मेकामा गुनासो रहिरह्यो । अनि फ्रेन्च दार्शनिक रोलाँ बार्थले 'दी डेथ अफ दी अथर' को कुरा गरिरहँदा नेपाली लेखक शंकर लामिछानेले भने एक हजार वर्षपछि जन्मिने इप्सा बोकिरहे । उनले बारम्बार दोहोर्‍याइरहने वाक्य हो, 'म एक हजार वर्षपछि जन्मिने पृथ्वीको मान्छे हुँ ।' असलमा, उनी एक इमानदार लेखक हुन् । उनले 'प्लेगियारिज्म्' (साहित्यिक चोरी) को आरोप कति सहजै स्वीकार गरे । माइकल कर्वीको लेखमा आधारित भनी लेखिएको 'आभा गार्देको सौन्दर्यशास्त्र' नामक लेखउपर कुमुदिनीले तेर्साएको तगाराले उनको लेखनयात्रामा पूर्णविराम लगाइदियो । तर अफसोच ! कुमुदिनीको हुन् ? हालसम्म बाहिर आउन सकेकी छैनन् ! (यस्ता महान् लेखकको यात्रालाई बर्जित तुल्याउने वास्तविक कुमुदिनीसँग एकपटक भेट गर्ने ठूलो धोको छ मेरो, खुल्ला आह्वान पनि हो यो ।) विसं १९८४ साल चैतमा जन्मेका यी महान् लेखकको मृत्यु मेनेन्जाइटिजका कारण २०३२ माघ १० गते भयो । 'के गरे देखिन् मैले ठीक हुन्छ ?' भन्दै एकदिन देवकोटाकामा पुगेका थिए उनी र त्यसदिन महाकवि देवकोटाले 'रिपिटिसन अफ वर्क अन दी सेम लाइन ह्याज नो मिनिङ' भनेपछि लामिछाने आफ्नै पृथक् बाटो पैलाउन लागिपरेका थिए । जुन बाटाले आज पनि अझ बढी फराकिलो भएर सबै लेखकलाई हिँडाइरहेको छ ।
मनमा रह्यो दु:खको खात
गरिबको छोरो म त !
बहुभाषाका ज्ञाता देवकोटा
मध्ये राति एकल यात्री
‘भूकम्पपछिको साहित्यको धार’ विषयक अनुसन्धान कार्यशाला
जुरेलीको माउ नै छैन भन्छन् हजुर !
फुकाइदेउ गाठो अब